I-WhatsApp ye-Mac, khuphela usetyenziso olusemthethweni kunye nezinye iindlela | IPhone iindaba
Obunye bobunzima abasebenzisi beMac abadla ngokuhlangana nabo kukuchaneka kokufaka usetyenziso oluthile kwezinye iinkqubo zokusebenza olunenkxaso eninzi evela kubaphuhlisi kwaye kwimeko yeApple imiselwe ukuba iye ekuthinjweni. Kwimeko yesi sicelo, sinezinto ezininzi esinokuzifaka I-WhatsApp ye-MacOS.
Okwethutyana sisebenzisa usetyenziso oluvulekileyo olwenziwe ngabaphuhlisi besisa, nangona kunjalo i-WhatsApp iphehlelelwe ukuphela kuka-Matshi 2016 Isicelo esisemthethweni seWhatsApp seMac.
1 Khuphela i-WhatsApp ye-Mac
2 Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp yeMac
Khuphela i-WhatsApp ye-Mac
Inkqubo ilula, ngokukhawuleza kwaye simahla. Khuphela i-WhatsApp ye-Mac simahla kulula njengokuya kwi Iphepha laseburhulumenteni le-WhatsApp Khuphela umxhasi wayo kwi-Mac.
Nje ukuba kwiwebhusayithi, iya kuthi ibhaqe ngokuzenzekelayo ukuba yeyiphi na inkqubo yokusebenza, kwaye iyakusivumela ukuba siyikhuphele ngokunqakraza ku "khuphela i-Mac", Khuphela ifayile ye-WhatsApp .dmg ukuyifaka ngokulula nangokukhawuleza kwi-MacOS yethu.
Okwangoku, ukuhambelana kuphela kweMacOS. Nangona kunjalo, sinenye enye Ezinye iindlela zeMac njengoFranz, isicelo simahla kwaye esivumela ukuba sisebenzise i-WhatsApp kwi-Mac ngendlela elula ongazange uyicinge, kufuneka khuphela kwiwebhusayithi yabo.
Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp yeMac
Ewe ngelishwa, i Umxhasi weWhatsApp weMac yinto eyaziwa ngokuba yi "app yewebhu", oko kukuthi, ngumfanekiso omncinci wesikhangeli esivumela ukuba senze imisebenzi WhatsApp Web. Ngamafutshane, luhlobo olukhanyayo lweWhatsApp yeWebhu, kodwa ifakwe kwinkqubo yethu yokusebenza. Ngale ndlela, sele siyazi ukuba yeyiphi inkqubo emayilandelwe.
Kuya kufuneka sifake ifayile ye-.I-WhatsApp dmg yeMac esikhe sayikhuphela ngaphambili, emva koko siyenze. Nje ukuba iqale, ikhowudi "Bidi" iya kuvela kwiscreen, ngalo mzuzu siya kwi-iPhone okanye kwi-Android esihlala sisebenzisa kuyo iWhatsApp. Emva koko, singena kuseto lweWhatsApp kwaye ucofe ukhetho ku "WhatsApp Web".
Ukongezwa kwekhamera kuya kuyivula loo nto izokuvumela ukuba uskene le khowudi yeBidi ingentla kwaye siza kuqala uku Sebenzisa i-WhatsApp kwi-Mac simahla. Lo mthengi uya kusivumela ukuba sithumele kwaye sikhuphele iifoto kunye nevidiyo eziqhelekileyo zeWhatsApp, ezinje ngamaxwebhu ahambelanayo, iPDF kunye .docx.